အိုးထရက်ဖို့ဒ်အုံကြွမှုမှာ ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေက ကာရေဂါကို ဘာတွေပြောခဲ့လဲ? ဒီဖြစ်ရပ်ကြောင့် အမှတ်လျှော့ခံရတော့မှာလား? – Sports A2Z
အိုးထရက်ဖို့ဒ်အုံကြွမှုမှာ ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေက ကာရေဂါကို ဘာတွေပြောခဲ့လဲ? ဒီဖြစ်ရပ်ကြောင့် အမှတ်လျှော့ခံရတော့မှာလား?
ပြီးခဲ့တဲ့ညက အိုးထရက်ဖို့ဒ်မှာ ကစားဖို့ စီစဥ်ထားတဲ့ ယူနိုက်တက်နဲ့ လီဗာပူးလ်ပွဲဟာ ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေရဲ့ ဆန္ဒပြမှုနဲ့ အိုးထရက်ဖို့ဒ်ကွင်းထဲကို စီးနင်းဝင်ရောက်ပြီး အုံကြွမှုကြောင့် လုံခြုံရေးအရ ပွဲဖျက်ခဲ့ရပြီး ဒီပွဲကို ပြန်လည်ကစားဖို့ ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်။
Sky Sports ရုပ်သံလိုင်းမှာ ဘောလုံးပွဲအစီအစဥ်တင်ဆက်ဖို့အတွက် ကွင်းတွင်းကို ရောက်ရှိနေတဲ့ ဂျေမီ ကာရေဂါနဲ့ ဂယ်ရီ နဗီးလ်တို့ဟာ ဆန္ဒပြ ယူနိုက်တက်ပရိသတ်ထုနဲ့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တိုးခဲ့ရပြီး စကားပြောဆိုမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြရင်း ပရိသတ်တွေရဲ့ ဆန္ဒကို သိခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကာရေဂါအနေနဲ့ သူတွေ့ဆုံခဲ့ရတဲ့ ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေဟာ ဆူပူသောင်းကျန်းလိုစိတ် မရှိကြဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်သလို သူတို့ဟာ လူကောင်းသူကောင်းတွေဖြစ်ကြောင်းနဲ့ အသင်းပိုင်ရှင် ဂလေဇာမိသားစုရဲ့လုပ်ရပ်ကို စိတ်ပျက်နေလို့ အသင်းကထွက်ခွာဖို့ တောင်းဆိုနေတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
” သူတို့ ဘယ်လောက်စိတ်ပျက်နေလဲဆိုတာကို မြင်ခဲ့ရတယ်။ သူတို့အသင်းပိုင်ရှင်ကို သူတို့စိတ်ပျက်နေကြတယ်။ ကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်က လီဗာပူးလ်အမာခံပရိသတ်တယောက်အဖြစ် ယူနိုက်တက်ကွင်းထဲကို ရောက်နေတာပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့က ကျွန်တော့်ကို ရန်ပြုလိုစိတ် မရှိပါဘူး”
” သူတို့က ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါ။ ကွင်းထဲမှာ ဘာပြဿနာတစုံတရာမှ မရှိခဲ့ဘူး။ ကွင်းပြင်ပိုင်းမှာတော့ ဘာဖြစ်ခဲ့လဲ ကျွန်တော်မပြောတတ်ပါဘူး။ သူတို့ အဓိကအထူး​ပြောချင်ကြတာက အသင်းပိုင်ရှင်က ပရိသတ်လိုချင်တဲ့ ကစားသမားတွေကို မဝယ်ပေးရကောင်းလားဆိုတာတင် မကပါဘူး ”
” စူပါလိဂ်အရှုပ်တော်ပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့လို့ ဂလေဇာမိသားစုကို သူတို့ မကျေနပ်ကြတာပါ။ သူတို့ရဲ့စိတ်ကို ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လီဗာပူးလ်အသင်းဟာလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်က သူတို့အသင်းပိုင်ရှင်ကို ဖြုတ်ချဖို့ ဆန္ဒပြခဲ့ကြဖူးပါတယ် ” လို့ ကာရေဂါက ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေရဲ့ ဆန္ဒကိုအလေးထားကြောင်း ပြောသွားခဲ့တာပါ။
ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေရဲ့ အိုးထရက်ဖို့ဒ်အုံကြွမှုနဲ့ ကွင်းထဲကို စီးနင်းဝင်ရောက်မှုတွေဟာ မန်စီးတီးကို စောစောစီးစီးချန်ပီယံမဖြစ်စေချင်လို့ ပွဲပျက်အောင် ပြုမူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဝေဖန်မှုတွေလည်း ရှိနေသလို ဒီဖြစ်ရပ်ကြောင့် ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ အမှတ်လျှော့ခံရနိုင်ဖွယ် ရှိနေသလို ပွဲပြန်မကစားဘဲ လီဗာပူးလ်အသင်းကို အနိုင် ၃ မှတ် ပေးအပ်ရဖွယ် ရှိနေကြောင်းလည်း ဆွေးနွေးမှုတွေ မြင့်တက်နေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
ၿပီးခဲ့တဲ့ညက အိုးထရက္ဖို႔ဒ္မွာ ကစားဖို႔ စီစဥ္ထားတဲ့ ယူႏိုက္တက္နဲ႔ လီဗာပူးလ္ပြဲဟာ ယူႏိုက္တက္ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ဆႏၵျပမႈနဲ႔ အိုးထရက္ဖို႔ဒ္ကြင္းထဲကို စီးနင္းဝင္ေရာက္ၿပီး အုံႂကြမႈေၾကာင့္ လုံၿခဳံေရးအရ ပြဲဖ်က္ခဲ့ရၿပီး ဒီပြဲကို ျပန္လည္ကစားဖို႔ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရပါတယ္။
Sky Sports ႐ုပ္သံလိုင္းမွာ ေဘာလုံးပြဲအစီအစဥ္တင္ဆက္ဖို႔အတြက္ ကြင္းတြင္းကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေဂ်မီ ကာေရဂါနဲ႔ ဂယ္ရီ နဗီးလ္တို႔ဟာ ဆႏၵျပ ယူႏိုက္တက္ပရိသတ္ထုနဲ႔ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္တိုးခဲ့ရၿပီး စကားေျပာဆိုမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရင္း ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ဆႏၵကို သိခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ကာေရဂါအေနနဲ႔ သူေတြ႕ဆုံခဲ့ရတဲ့ ယူႏိုက္တက္ပရိသတ္ေတြဟာ ဆူပူေသာင္းက်န္းလိုစိတ္ မရွိၾကဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပျခင္းျဖစ္သလို သူတို႔ဟာ လူေကာင္းသူေကာင္းေတြျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ အသင္းပိုင္ရွင္ ဂေလဇာမိသားစုရဲ႕လုပ္ရပ္ကို စိတ္ပ်က္ေနလို႔ အသင္းကထြက္ခြာဖို႔ ေတာင္းဆိုေနတာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
” သူတို႔ ဘယ္ေလာက္စိတ္ပ်က္ေနလဲဆိုတာကို ျမင္ခဲ့ရတယ္။ သူတို႔အသင္းပိုင္ရွင္ကို သူတို႔စိတ္ပ်က္ေနၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ေျပာမယ္ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္က လီဗာပူးလ္အမာခံပရိသတ္တေယာက္အျဖစ္ ယူႏိုက္တက္ကြင္းထဲကို ေရာက္ေနတာပါ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က ကြၽန္ေတာ့္ကို ရန္ျပဳလိုစိတ္ မရွိပါဘူး”
” သူတို႔က ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကတာပါ။ ကြင္းထဲမွာ ဘာျပႆနာတစုံတရာမွ မရွိခဲ့ဘူး။ ကြင္းျပင္ပိုင္းမွာေတာ့ ဘာျဖစ္ခဲ့လဲ ကြၽန္ေတာ္မေျပာတတ္ပါဘူး။ သူတို႔ အဓိကအထူး​ေျပာခ်င္ၾကတာက အသင္းပိုင္ရွင္က ပရိသတ္လိုခ်င္တဲ့ ကစားသမားေတြကို မဝယ္ေပးရေကာင္းလားဆိုတာတင္ မကပါဘူး ”
” စူပါလိဂ္အရႈပ္ေတာ္ပုံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုခ်ခဲ့လို႔ ဂေလဇာမိသားစုကို သူတို႔ မေက်နပ္ၾကတာပါ။ သူတို႔ရဲ႕စိတ္ကို ကြၽန္ေတာ္နားလည္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လီဗာပူးလ္အသင္းဟာလည္း လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္က သူတို႔အသင္းပိုင္ရွင္ကို ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ ဆႏၵျပခဲ့ၾကဖူးပါတယ္ ” လို႔ ကာေရဂါက ယူႏိုက္တက္ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ဆႏၵကိုအေလးထားေၾကာင္း ေျပာသြားခဲ့တာပါ။
ယူႏိုက္တက္ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အိုးထရက္ဖို႔ဒ္အုံႂကြမႈနဲ႔ ကြင္းထဲကို စီးနင္းဝင္ေရာက္မႈေတြဟာ မန္စီးတီးကို ေစာေစာစီးစီးခ်န္ပီယံမျဖစ္ေစခ်င္လို႔ ပြဲပ်က္ေအာင္ ျပဳမူခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ေဝဖန္မႈေတြလည္း ရွိေနသလို ဒီျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ယူႏိုက္တက္အေနနဲ႔ အမွတ္ေလွ်ာ့ခံရႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနသလို ပြဲျပန္မကစားဘဲ လီဗာပူးလ္အသင္းကို အႏိုင္ ၃ မွတ္ ေပးအပ္ရဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္းလည္း ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျမင့္တက္ေနတာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။
အာဆင်နယ်သတိထားရမယ့် ဗီလာရီးရဲလ်ကစားသမားနဲ့ အာတီတာက အသင်းအတွက် ဘာကြောင့် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ကာဇိုလာ ပြောသွား
ဟာဗတ်ဇ်အစား ဆိုးရွားနေတဲ့ တီမို ဗာနာကို ရီးရဲလ်နဲ့ပွဲမှာ ဘာကြောင့်ဆက်သုံးသင့်လဲ